'ओलीले भन्नुभयो, अब गोविन्द केसीले फेरी अनसन बस्नुपर्दैन'
सुवास नेम्वाङ, नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं, ११ साउन । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै २७ दिन अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले हिजोमात्रै अनसन तोडे । सरकारी पक्ष र केसी पक्षबीच नौं बुँदे सहमति भएपछि हिजो उनको अनसन तोडिएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बारा गठित सरकारी वार्ता टोली र प्रा.डा. केसी पक्षबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।
उक्त वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारी तर्फबाट नेकपाका नेता एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाङ नेम्वाङले नेतृत्व गरेका थिए । केसीलाई सरकारका तर्फबाट उपनेता नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेकाले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए ।
प्रस्तुत छ यहि लामो अनसन तोडाउन सफल भएका नेकपाका नेता सुवाङ नेम्वाङसँग भएको एक अन्तवार्ताको संपादीत अंशः
प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका कारण हामी निष्कर्षमा पुग्यौं
डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गराउन र अनसन तोडाउनका लागि हामी सबैले यसमा प्रयास गर्यौं । नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी(ने क पा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरन्तर अन्तिम समयसम्म लाग्नुभयो र हामी निष्कर्षमा पुग्न सफल भयौं र सहमति भयो ।
अब डा. गोविन्द केसीले यो देशमा अनशन बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो, अब गोविन्द केसी डाक्टरले फेरी अनसन बस्नु नपर्ने स्थिति हामी सिर्जना गर्छौं । हामी त्यो वातावरण तयार गर्छाैं, त्यसमा लाग्छौं ।
सहमति कार्यान्वयनको चरण के हुन्छ ?
हिजो हामीले सहमति गर्यौं । सहमतिको विन्दुबाट अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति हामी लागिसकेका छौं । हामी लाग्छौं । समस्या भनेको हामी आफैं हौं । हामी आफैंले गर्छु भनेको कुरा गर्ने हो भने कहिलेपनि समस्या रहँदैन । आखिरमा अहिले डा. केसीले उठाउनुभएको कुराहरु अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उब्जिएका कुरा त होइनन् । यो पहिलेदेखि रहेका थिए । अहिलेको सरकारले आफ्नो पालामा यसलाई टुंगोमा पुर्याउँछु भनेर लागेको हो । त्यसकारणले हामी आफूले दृढतापूर्वक लाग्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । समस्याहरुलाई समाप्त गर्न सकिन्छ ।
केहि संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ ?
हामीले सहमति गरिरहँदा कुन मेडिकल कलेज कसरी चलिरहेको छ ? कुन अस्पताल कसरी चलिरहेको छ ? कहाँ छ ? भनेर कुनै निश्चित मेडिकल कलेज, अस्पताल वा संस्थालाई ध्यानमा राखेर गरेनौं । हामीले यो क्षेत्रमा एउटा मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने र कहिं कतै विकृति र विसंगती छन् भने त्यसलाई समाप्त पार्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गर्यौं । अब कार्यान्वयनका थुप्रै कुराहरु छन् । एउटा सरकारले आफ्ना निर्णयहरुलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा छ भने अर्काे कुरा सम्बन्धित विधेयक संसदमा छ । जनताको संस्था, जनताको सबै समस्याहरु राख्ने संस्था, थलो संसद हो । त्यो संसदमा पेश भएको विधेयकलाई त्यहि संसदको प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढाउँदै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने छ ।
सुरुदेखी नै हामीले संसद छ हैं त्यहाँ भनेका छौं । त्यहिअनुसार हामी एक टुंगोमा पुग्यौं । त्यो प्रक्रियालाई हामी तुरुन्तै अघि बढाउँछौं । त्यसलाई निष्कर्षमा अगाडि पुर्याउँछौं भने अर्काे विभिन्न निर्णयहरु गर्दै कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं । अहिले यो र त्यो भन्दा भनेर भन्दा विवाद होला । सबै विषयलाई हामी दृढतापूर्वका कार्यान्वयन गछौैं ।
अनसन बस्दा मात्र चासो दिने नत्र नदिने किन ?
सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौं । यस्ता विषयहरु सबैका साझा विषय हुन् । यस्ता विषयहरु राजनीतिको विषय बन्नु हुँदैन । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै विकृति र विसंगती छ । हिजोदेखी चलिरहेका कतिपय संस्थाहरु ठिक ढंगले चलेका छैनन् । मूल्य मान्यताबमोजिम चलेका छैनन् । पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा नगरी चलेका छन् । यी लगायतका थुप्रै कुराहरु छन् । यो त राजनीतिको विषय नै होईन । हामी सबैले साझा विषय बनाएर यो विकृति र विसंगतीलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । हामी सबै आग्रह/ पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अब विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ ?
यो नियमित अध्यायदेशबाट आएको नयाँ विधेयक हो । कसैलाई पुरानै हो भन्ने लाग्ला कसैलाई नयाँ भन्ने लाग्ला त्यो विवाद नबनाऔं । आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाऔं । हिजो भएका सहमतिलाई प्रक्रियामा हालिन्छ । समितिमा पुर्याइन्छ । समितिमा यसबारे छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । त्यसैले यो हिजोको अध्यायदेश बमोजिम, भएको वा नभएको जस्ता विवादमा परेर फेरी हिजोको विवादलाई कोट्याउनतर्फ नलागौं ।
हिजो दुई पक्षले सहमति गरेको कुरालाई अब संसदको प्रक्रियामा लैजान्छौं । संसदमा सैदान्तिक छलफल हुन्छ । संसोधन प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । दुई पक्षले सहमति गरेका कुराहरु संसोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि समितिमा पठाइन्छ । सम्बन्धीत समितिले त्यसमाथि छलफल गरेर त्यो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिईन्छ । यसरी कानून बन्छ । त्यो कानून बनाउने विषयमा दुई पक्षले हामी यसरी जान्छौं भनेर सहमति गरेका छौं ।
सहमतिभन्दा बाहिर पनि चिकित्सा क्षेत्रमा भिन्न विकृति छन् नि त्यसमा के हुन्छ ?
डा. केसीले उठाएका कुराहरु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा कुराहरु हुन् । डा. केसीले उठाएका र हामीले सोचेको भन्दा बाहिर पनि धेरै विकृतिहरु छन् । ती सबै कुरालाई हामी ध्यानमा राख्छौं र त्यसलाई समाधान गर्न अगाडि लाग्छौं ।
श्रमशोषण, सरकारी अस्पतालमा बसेर निजी क्लिनिकमा बिरामी पठाउने, डाक्टरको लापरबाही, चर्काे मूल्य असुल्नेलगायत थुप्रै कुराहरु छन् । स्वयं डाक्टर केसीले काम गर्नुभएको टिचिङ अस्पतालमै थुप्रै विकृति, विसंगतीहरु छन् । सबै विकृति, विसंगतीहरुलाई समाप्त गर्न हामीले दृढतापूर्वक पाईला चाल्नुको विकल्प छैन ।